Ngaba iUnited States isizwe samaKristu?
Inkolelo yokuba iMelika yiSizwe samaKristu
I-United States yiSizwe samaKristu.
Kwabanye abaxhasi abangenakuxhaswa kwecawa / ukuhlukana kombuso bacinga ukuba iMelika okanye eyasungulwa njengeSizwe samaKrestu kwaye le nkolelo inkulu kakhulu phakathi kwamaKhristikazi kaKrestu, abaPhakamileyo bamaKristu kunye nabo bonke abachasene necawa / ukuhlukana kombuso. Ingxaki ebalulekileyo yile bango yinkcazo yayo: uthini "isizwe samaKristu"? AmaKristu enza ukuba ibango lisenze njengoko beyazi ukuba bathetha ntoni, kodwa loo nto iyayibuza.
Kubonakala ngathi yenzelwe ukubonakalisa imvakalelo, kungekhona inyaniso.
UMerika nguSizwe samaKristu
Le ngenye yeengqondo apho kuthiwa "iMelika yiSizwe samaKristu" inokuba yinyani, ivumelekile kwaye iyasebenza:
Abaninzi baseMerika namhlanje bangamaKristu
Amaninzi aseMelika ngokusebenzisa imbali ibe ngumKristu
Isiko laseMerika liye lashukunyiswa kakhulu lobuKristu
I-America yinxalenye yeNgqobhoko, indawo yenkcubeko kunye nezopolitiko apho ubuKristu bubusa khona
Zonke ezi nkcazo zingabonwa ngokusemthethweni, kuxhomekeke kumongo, kodwa azinalo kakhulu kwiimeko zezopolitiko, iinkcubeko okanye zomthetho apho ibango elithi "iMelika liSizwe samaKristu" lenziwe ngokwenene.
Okubaluleke nakakhulu, iingxelo ezi ngasentla ziya kuba yinyaniso ukuba sithatha indawo ethi "umKristu" "ngombala" - iMelika "isizwe" samaKristu ngendlela efanayo "njengesizwe" esimhlophe. Ukuba abantu abafuni ukufumana impembelelo yezopolitiko ekupheleni kwesi sizathu, kutheni bazama ukukwenza oko ngaphambili?
Ukuba le nto yokugqibela ibonwa njengobundlobongela ngokobuhlanga, kutheni kungabonwa ukuba yiyona ntsapho inkolo?
I-America ayikho isizwe samaKristu
Ezi zibonakala ngathi ezinye zeentsingiselo ezibhekiselweyo abantu ababonakala bengqondweni:
IMelika yasungulwa kwiimfundiso zobuKristu, iinkolelo, izithethe
IMelika yayijoliswe ekukhuthazeni, ukukhuthaza okanye ukukhuthaza ubuKristu
I-America inendima yokudlala kwi-eschatology yobuKristu
UMerika luhlanga apho amaKristu ayenayo kwaye kufuneka abe nelungelo
I-America lizwe apho kukho iinkolelo zamaKristu kunye namaziko kwaye kufuneka ukuba nelungelo
Ukuqonda kangcono isimo sengqondo kunye nenjongo apha, kunokukunceda ukuba uqaphele ukuba abantu bathi iMelika "yobuKristu" ngendlela efanayo ibandla lamaMethodist elithi "lobuKristu" - likhona ngenxa yamaKristu akholwayo kwaye kufuneka ukuba luncede abantu ekubeni ngamaKristu. Enyanisweni, amaKristu kuphela "okwenyaniso" aseMerika kuba iMelika "yinyaniso" xa ibuKristu.
Ukukhusela iMelika njengeSizwe samaKristu
AmaKristu avalisela njani ibango lawo lokuba iMelika nguSizwe samaKristu? Abanye bathi abaninzi abaza apha babengamaKristu abaleka intshutshiso eYurophu. Ngaphandle kokuxhatshazwa kokushushiswa kwangaphambili ukunyanzelisa intshutshiso yolu xwebhu, oku kudibanisa umxholo wendlela kunye nokuba kutheni leli zwekazi lilungelelaniswe ngendlela kunye nangendlela eyenziwa ngayo i-United States, njengombutho wezomthetho.
Enye ingxabano kukuba iikoloni zakuqala zazinzisa iicawa kwaye oorhulumente basekela ngokunyanisekileyo ubuKristu. Oku akusiyo impikiswano efanelekileyo kuba le yimi meko apho abaninzi baseMerika bawalwa khona.
ISilungiso sokuQala sasijoliswe ngokukodwa ukuba singavumeli amasonto amisiweyo, kwaye kwiNgqungquthela yoMgaqo-siseko ezama ukubhalela uhlobo oluthile lokuxhasa inkxaso yobuKristu. Ukongezelela, abantu ngelo xesha babecaciswe "ngokungafihli." Uqikelelo olulungileyo lubonisa ukuba kuphela i-10% ukuya kwi-15% yabemi ngokwenene baye kwiinkonzo zecawa.
Kuyi nyaniso ukuba uBen Franklin uncetywe ukuba abahambeli kwiNdibano bavula iiseshoni zabo ngemithandazo yasekuseni, kwaye abantu abachasene nokuhlukana kwecawa kunye nelizwe bazama ukwenza oku kuninzi kule ndawo. Ngokutsho kweengxelo, uFranklin wacetyisa ukuba "ukuthandaza ngoku ukucela uncedo lwasezulwini, kunye nentsikelelo yakhe kwiingxoxo zethu, kubanjwe kule Nhlangano yonke intsasa ngaphambi kokuba siqhubele ishishini."
Ngaphandle kwento yokuba umthandazo onjalo ngokucacileyo awunjalo ngamaKristu ngokwemvelo, okokusoloko kushiywe kungagcinwanga kukuba isiphakamiso sakhe asizange samukelwe.
Enyanisweni, abathunywa abazange bakhathaze ngokuvota kuyo - endaweni yoko, bavota ukuba baphambuke ngosuku! Isiphakamiso asizange sithathwe ngosuku olulandelayo, kwaye uFranklin akazange akhathaze ukuthetha kwakhona. Ngamanye amaxesha, ngelinye ilanga, iinkokeli zonqulo ziya kuthi zikhohlise ukuba lesi siphakamiso samukelwa, ukuphazamiseka okubonakala ngathi kuvela kwiSenator u-Willis Robertson, uyise we-Christian Leader, uPol Robertson.
Ukugatya kwamagunya okusekwa kwesi sizwe kubuKristu kuya kubonakala kwinto yokuba uThixo okanye ubuKristu akukhankanyiwe naphina kuMgaqo-siseko. Ngaphezu koko, ngowe-1797 urhulumente uthethe ngokuthe ngqo ukuba akusiyo isizwe samaKristu. Esi sihlandlo kwakukho uxolo kunye nesivumelwano sokurhweba phakathi kweenkokheli zaseMelika kunye namaSilamsi eMntla Afrika. Iingxoxo zaqhutywa phantsi kwegunya likaGeorge Washington, kunye nomqulu wokugqibela, owaziwa ngokuba yiSivumelwano seTripoli, wavunywa yi-Senate phantsi kolawulo lukaJohn Adams, umongameli wesibini. Le mbambano ithi, ngaphandle kokulinganisa, ukuba "... Urhulumente waseUnited States awukho, nangayiphi na ingqiqo, esekelwe kwinkolo yobuKristu ...."
Ngokuchasene namabango awenziwe ngabanye kwi-Right Religious, i-America ayizange ifumaneke njengeSizwe samaKristu okwakuboniswa emva kobuninzi abangenabuthixo kunye nabantu. Ngokuphambene noko kunjalo, ngokwenene. Umgaqo-siseko ungumqulu ongenamhlonela uThixo kwaye urhulumente waseUnited States wamiselwa njengesikhungo esisemthethweni. Nangona kunjalo, unqatshelwe ngamaKristu athetha kakuhle afune ukuphazamisa imigaqo yelizwe kunye nesakhelo ngenxa yale nto okanye "isizathu esilungileyo," ngokuqhelekileyo enomdla wokukhuthaza oku okanye imfundiso yenkolo.
Kuthetha ukuthini Ukuba Nomonde?
Yintoni Ubuxoki Bokuzimela?
Iinkcazo zeeNkcazo, izizathu, kunye nokuQinisekisa
Fumana i-Argentina Dance
Iingoma zeBeatles: "Sawubona i-Goodbye"
Ukufaka isicelo kwiSikolo soMgqibelo: Okufuneka Ukwazi
Isampula se-MBA Inkcazo yeNkcazo ebonisa ubuKhokheli
UkuKhanya kokuKhanya kwemihla ngemihla
Iingcaphuno NgeNyanga ka-Epreli kwababhali abakhulu
I-Square Square I-Velocity Example Problem
Kutheni UAlexandro Watshisa I-Persepolis?